Ndị na-eweta abrasive na ụlọ ọrụ | Ndị na-emepụta abrasive China
Ekwentị: +86 18041030986
[Detuo] belt seramiiki seramiiki
Seramiiki abrasive eriri
Brown gwakọtara eriri alumina
Dara mbà n'obi wheel
Zirconium corundum na-agbaze na okpomọkụ dị elu na ọkụ ọkụ ọkụ eletrik na ájá zircon dị ka isi ihe. Ọ nwere ederede siri ike, usoro kọmpat, ike dị elu na oke ọkụ ọkụ. Dị ka ihe abrasive, ọ nwere ike ịmepụta nnukwu arụmọrụ na-arụ ọrụ na-egweri wiil, nke nwere mmetụta dị mma na akụkụ nchara, ihe nkedo ígwè, ihe ndị na-eguzogide okpomọkụ, na ihe dị iche iche alloy; na mgbakwunye, zirconium corundum bụkwa akụrụngwa refractory. Ọ bụ ezigbo ihe eji eme ihe eji eme ihe eji eme ihe na ntanetị. Enwekwara ike iji ya rụọ brik zirundium brik corundum maka iko na-agbaze iko.
[Detuo] Zirconia Alumina
A na-eji alumina pụrụ iche mee seramiiki seramiiki dị ka ihe bụ isi, agwakọta ya na ọtụtụ obere ụwa gbanwere ihe, ma tinye ya na nnukwu okpomọkụ. Ọ nwere nnukwu ekweghị ekwe na nkọcha onwe ya. Yousheng na-adabere pụrụ iche echiche nke-egweri na-agbakwunye pụrụ iche chemical ka seramiiki abrasive na e ji mara nke oyi ọnwụ. Ihe eji eme seramiiki nwere ike idowe ume na-adịgide adịgide, nke mere na ngwaọrụ abrasive emere nwere ike iru ndụ ogologo ndụ. Abrasive nwere ngwa ngwa sara mbara nke ukwuu, nke enwere ike iji mee ihe maka ịkpụ na ịghacha n'okpuru nrụgide dị elu, na maka ịmịcha ihe dị iche iche dị iche iche, gụnyere gri egweri, ịmị egweri, ịkụcha crankshaft na ndị ọzọ.